ယောင်္ကျားလေး တွေ တောင် လုပ် ရန် မလွယ်ကူ တဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အရာတွေ ကို အလွယ်တကူ လုပ်ပြသွားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ယောင်္ကျားလေး တွေ တောင် လုပ် ရန် မလွယ်ကူ တဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အရာတွေ ကို အလွယ်တကူ လုပ်ပြသွားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်.
ယောင်္ကျားလေး တွေ တောင် လုပ် ရန် မလွယ်ကူ တဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အရာတွေ ကို အလွယ်တကူ လုပ်ပြသွားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်.
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိန်းကလေး ချင်းတောင် ငေးမောအားကျ နေရသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်လက် ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူးနော်။ ခေတ်ရှေ့ပြေး ဖက်ရှင်တွေကို လိုက်ဖက်ညီအောင် ဝတ်ဆင်တတ်ပြီး ပွဲအခမ်းအနား များတွင်လည်း သူမ မပါရင် ပွဲမစည်လောက်အောင် ကို နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေတဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Gym လည်း ပုံမှန်ဆော့သူလေးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ညို့အားပြင်းတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လှုမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိကာရေပန်းစား လူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ယောင်္ကျားလေးတွေတောင်လုပ်ရန်မလွယ်ကူတဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အရာတွေကိုအလွယ်တူလုပ်ပြသွားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံတိုင်းက ဟာခနဲဟင်ခနဲ ဖြစ်သွားရလောက်အောင်ကို သင်ဇာတစ်ယောက် တော်လွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သင်ဇာက ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း သင်ဇာဝင့်ကျေ ာ်ရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။သင်ဇာရဲ့ ရှေ့ဆက် အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါအုံးနော် ပရိသတ်ကြီး။
အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး မိန္းကေလး ခ်င္းေတာင္ ေငးေမာအားက် ေနရသူေလးကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြမ်ားစြာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ မင္းသမီးေလး တစ္လက္ ဆိုရင္လည္း မမွားႏိုင္ပါဘူးေနာ္။ ေခတ္ေရွ႕ေျပး ဖက္ရွင္ေတြကို လိုက္ဖက္ညီေအာင္ ဝတ္ဆင္တတ္ၿပီး ပြဲအခမ္းအနား မ်ားတြင္လည္း သူမ မပါရင္ ပြဲမစည္ေလာက္ေအာင္ ကို နာမည္ႀကီးေရပန္းစားေနတဲ့ မင္းသမီးေလး တစ္လက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Gym လည္း ပုံမွန္ေဆာ့သူေလးျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕ အလွတရားေတြ ေပၚလြင္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္နဲ႔ ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကို လႈမႈကြန္ယက္ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိကာေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း ေယာက်ၤားေလးေတြေတာင္လုပ္ရန္မလြယ္ကူတဲ့ ခက္ခက္ခဲခဲ အရာေတြကိုအလြယ္တူလုပ္ျပသြားတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကိုေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ပုံတိုင္းက ဟာခနဲဟင္ခနဲ ျဖစ္သြားရေလာက္ေအာင္ကို သင္ဇာတစ္ေယာက္ ေတာ္လြန္းေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သင္ဇာက ၿပီးျပည့္စုံေနတဲ့ အလွတရားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာပါ။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း သင္ဇာဝင့္ေက် ာ္ရဲ႕ အမိုက္စားပုံေလးေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ ။သင္ဇာရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္အားေပးလိုက္ပါအုံးေနာ္ ပရိသတ္ႀကီး။
Previous post ကိုယ်လုံးလေး ကို လှည့် ပြကာ အူတွေယား လောက်အောင် လုပ်ပြနေ တဲ့ အိချောပို ရဲ့ TIK TOK VIDEO
Next post အတွင်းသား တွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ဆွဲအားပို နေတဲ့ မျက်ဝန်း